Pane zvinyorwa zvisinganyanyi kuzivikanwa nezvekunyorera kuAmazon zvinogona kudzivisa kubudirira kwangu here?
Hungu, ndinoziva zvishoma zvisinganyatsozivikanwe nezvekuisa maAmerica zvinowanzogadzira mutsara pakati pekubudirira kwebhizimisi kubudirira uye kukanganisa kwakakwana pane iyo nzvimbo yakawanda pamusika. Ndiri kureva mamiriro ezvinhu anowirirana apo iwe ungave uchishandisa chinonyanya kukosha mazwi ekutengeserana kwekugadzirwa kwako kusagadzikana kwete zvakakwana zvakakwana. Kana, semuenzaniso, kana iwe uri kukundikana kuwana chigadzirwa chose chakanyatsogadziriswa nenzira yakarurama, kunyanya kuburikidza nemasaini chaiwo e-keyword-oriented fields. Zvose izvo zvakabatanidzwa pamwe hazvingokudziviriri kuti urege kuwana iyo yakakodzera kuAmazon, asi inogona kukubhadhara iwe chaiyo webhutta, uye pakupedzisira - kutengesa kwenyika uko. Saka, pasi apa ndichaenda kuzokuratidza matanho makuru iwe kuti uzvidzivirire, kana kuti nokukurumidza kuwana zvose zvigadziriswa kuitira kuti chero ipi zvayo inogona kuipa yehutungamiri hwako paAmerica ichaderedzwa - congelar el movimiento en fotografia.
Chokwadi 1: AmaA9 A9 Algorithm Sees Tsamba seChwordword Field
Vazhinji vatengesi veAmazon vanotenda kuti kuisa mamwe mazwi akafanana mumusoro wavo wechigadzirwa uye backend keyword fields is AUST. Asi ivo vose vari kutadza zvakanyanya. Sei? Kungofanana nokuti maAgorigithm anowanikwa mukati mavo anopa mutsara chaiwo kune mumwe munhu wekutanga mazwi anowanikwa mubhuku rako rekugadzirwa kwezvinhu kana kune imwe nzvimbo mumutauro wemashoko mashoma - nevaya vakanyorwa mubhokisi rekutsvaga nevashambadziri vapenyu. Uye avo vanoziva neSEO vanozviziva zvakanaka: kushandisa zvinyorwa hazvisi chinhu chakanaka zvechokwadi.
Chokwadi 2: Mutengo Wemiti uye Keyword Fields Zvine Urefu Weight
Inonyanya kuonekwa kunyengedzwa apo vanhu vanopa kuwedzera kukura zvakanyanya kumusoro wechibereko, pane imwe nzvimbo kana chikamu mukati mezvakagadzirwa. Asi chokwadi ndechokuti mutemo wechiratidzo unonyanya kukosha - zvechokwadi, kana uchiona mumaziso eGoogle search injini. Uye izvi hazvirevi kuti chinhu chimwe chete chinofanira kuva chechokwadi pamusoro pekuisa maAmerica. Avo vanofunga zvakafanana nezvekugadzirwa kwechigadzirwa kugadzirwa kwemaAmerica hazvina kururama zvakare.
Chokwadi 3: Mitsara yakareba-Dhinda Haingaiti nokuda kwe Keyword Fields
Ngatitarisei - mutsara wakafanana. Ichokwadi, inoshanda kuburikidza nekubatanidza mazwi ega ega kuitira kuti pave pasina chikonzero chekuparadza yako chigadzirwa chinzvimbo nzvimbo nekupinda kakawanda mazwi. Panzvimbo iyo, iwe zviri nani kubvisa chero zvinyorwa uye kuisa mamwe mazwi ezvinyorwa mumutemo wakachena uye wakajeka, wakanaka. Kuita kudaro, iwe uchava nekakawanda nzvimbo huru yakasara yekuwana imwe yako chinangwa mazwi.
Chokwadi chechina: Kutaura, maCommas and Plurals Matambudziko
AmaA9 eAngland anoita nhoroondo yekugadzirisa. Ndiri kureva mamiriro ezvinhu apo iwe unogona kutora shoko rokutanga uye unongowedzera kusiyana kwakasiyana-siyana kwekupedzisira. Somuenzaniso, "kudya," "kudya," "kudya," nezvimwewo. Saka, chimwe nechimwe chezvinyorwa izvi zvakasiyana-siyana zvichabatwa seimwe sarudzo yekutsvaga. Sezvo makasita uye zvichida mamwe maitiro ekugumira - Amazon inongozvidza zvose. Ndicho chikonzero nei pasina chikonzero chekuparadza nguva yako pane chero nzira dzakasarudzwa pamusoro payo - hazvina kungogumira pamatambudziko ako kuAmazon.